HR - Motadata
Maka ndị otu HR
Ahụmahụ onye ọrụ pụrụ iche na Motadata ServiceOps
Leverage smart automation, Virtual Agent nke NLP kwadoro, usoro ọrụ nwere ọgụgụ isi, yana katalọgụ ọrụ nwere ọgụgụ isi iji kwalite usoro HR.
Ihe ịma aka nke Ndị otu HR nke oge a
N'ahịa teknụzụ dijitalụ nke taa na-ebute, usoro HR nke akwụkwọ ntuziaka na sistemụ nketa na-eme ka mgbanwe ndị ọrụ na-abawanye n'ihi enweghị nrụpụta. Ihe ịma aka kasịnụ maka ndị otu HR bụ iwepụ ọrụ nkịtị ma kwụsị ịkpọ ndị uwe ojii iwu; kama, ihe ha lekwasịrị anya kwesịrị ịbụ n'ọrụ ndị na-arụpụta uru karịa ka ha wee nweta ọmarịcha arụmọrụ.
Agbala aka na nkwalite ndị ọrụ na njigide ndị ọrụ site na ịnakwere njikwa ọrụ Enterprise na ngalaba HR iji kwalite ọrụ HR.
Motadata ServiceOps na-enye ndị otu aka ịnye ndị ọrụ ha ahụmịhe kachasị mma n'ebughị ndị ọrụ HR ọrụ ọrụ ụlọ ọrụ na-agwụ ike.
Ngwọta Motadata ServiceOps maka ndị otu HR
Jiri Motadata ServiceOps kwalite njikwa ọrụ HR gị
Meziwanye Ọrụ ndị Ọrụ
Nye ndị ọrụ ahụmịhe dịka ndị ahịa. Kpọkọta ngwa na ọrụ HR niile n'otu ọnụ ụzọ mbata.
Gbaa onye ọrụ ume ka ọ rụọ ọrụ nkeonwe maka arịrịọ ezumike, ịhapụ nguzozi, arịrịọ ego ntụpọ, wdg site na katalọgụ ọrụ nwere ọgụgụ isi.
Melite ahụmịhe onye ọrụ site n'inye azịza oge na nsonaazụ amụma site na usoro akpaaka.
Chekwa oge na ọnụ ahịa
Wetulata ọnụ ahịa tiketi dị larịị-otu site na onye ọrụ mebere AI na-akwado. Nyere ndị ọrụ aka ka ha nweta nzaghachi akpaaka maka okwu nkịtị.
Wedata ịdabere na mpempe akwụkwọ Excel na ozi-e maka arịrịọ HR iji chekwaa oge site na iji katalọgụ ọrụ arụgoro mbụ.
Wepụ oku oche ọrụ site n'ịmepụta ebe nchekwa akwụkwọ dị mkpa yana ọbá akwụkwọ FAQ n'ime ebe ihe ọmụma na-ekpuchi isiokwu dị ka amụma ezumike, mkpuchi ahụike, uru ndị ọrụ, wdg.
Kwalite arụmọrụ HR
Hazie na dobe arịrịọ ndị ọrụ na mkpesa ndị ọrụ dabere na ọnọdụ eburu ụzọ kọwaa site na oke tiketi ọgụgụ isi dabere na AI.
Were usoro nhazi usoro na ịhazi na ijikwa atumatu HR ọhụrụ na njikwa oru ngo.
Jiri dashboard siri ike mee mkpebi dabere data na-enyocha arụmọrụ ndị ọrụ HR, oke ọrụ, ọkwa nnabata SLA, na ihe ndị ọzọ.
Uru maka Ndị otu HR
Site na Serviceops, kwalite ọrụ HR iji nye ahụmịhe ka mma maka ndị ọrụ na ndị njikwa yana nsonaazụ amụma maka azụmaahịa ahụ.
Ụzọ Akwụkwọ Mbelata
Megharịa njikwa arịrịọ na tiketi, wepụ ụzọ akwụkwọ ntuziaka ka ị na-eji ụzọ nyocha na-enye ọrụ enwere ike ibu amụma.
Nye ọrụ na-agbanwe agbanwe na akpaaka usoro ọrụ, njikwa ọrụ, na katalọgụ ọrụ nwere ọgụgụ isi iji kwalite ahụmịhe ndị ọrụ.
Ọhụụ ka mma gafere ngalaba
Kwado ndị otu HR ka ha nwee ike imekọ ọnụ na ịrụ ọrụ n'otu tiketi iji bulie nrụpụta.
Chekwaa oge a na-etinye n'okwu ndị a na-ahụkarị na ndị ọrụ NLP kwadoro, akpaaka nwere ọgụgụ isi, ebe ihe ọmụma siri ike, na katalọgụ ọrụ arụrụ arụ iji melite anabata.
Ịmalite ọrụ HR
Mepụta njikwa arịrịọ ma jikwaa arịrịọ HR site na ọwa dị iche iche dị ka ozi-e, ọnụ ụzọ ọrụ onwe, nkata, oku na ihe ndị ọzọ site na iji otu ikpo okwu.
Chọta ọrụ ndị na-enye uru kachasị mma n'ihe gbasara ahụmịhe site na iji usoro njikwa nzaghachi anyị, nke nwere ike weghara nzaghachi sitere n'aka ndị ọrụ wee rute na akara ihe.